သားသမီး ရှိတဲ့ မိဘတိုင်း ဖတ်ထားသင့်တဲ့ သိထားသင့်တဲ့ စာ – GuGuGarGar
ပိတ်ရက် ဆိုတော့ သမီးလေးကို ထမင်းခွံ့ဖို့တာဝန်ကို ကျွန်မ ယူလိုက်တယ်။ သမီးကကောင်းကောင်းမစား၊ ဆော့ လို့ချည်းသာ နေတော့တာ။ ဘယ်လိုချော့ကျွေးကျွေးကိုမရ။
“ မီးငယ်က အရင်နေ့တွေ ထမင်းစားတယ်ဆို အခုကျ မစားပါလား ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်”
“ သမီးက ချော့ကျွေးနေတာကိုး ပေး ကြီးကြီးကျွေးပြမယ်”
ပန်းကန်ကိုယူပြီး သမီးရှေ့ကို သွားထိုင်တော့ သမီးကကျွန်မကို လှမ်းကြည့်တယ်။ သူ့အကြည့်က တစ်မျိုးပဲ ငိုမဲ့မဲ့ကလေးရယ်။
“ မီးငယ် တစ်လုပ်စားလိုက် မစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ သိတယ်နော်”
ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ သမီးက ချက်ချင်းပါးစပ်ကို ဟပေးတယ်။ မျက်နှာလေးကတော့ စားချင်နေတဲ့ပုံမပေါ်။
“ တွေ့တယ်မလားသမီးရဲ့ ကြီးကြီးတို့က အထာရှိတယ် အဲဒီလိုကျွေးရတာ”
“ ဟင် ဘယ်လို အထာတုန်း ကြီးကြီးရဲ့”
“ မီးမီးငယ် ပြောပြလိုက် မီးမီးထမင်းမစားရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ”
“ မီးမီး မစားရင် …. လမ်းထိပ်က ကုလားကြီးကိုခေါ်ပြီး ပေးပစ်လိုက်မှာတဲ့ မေမေ”
သမီးအသံ တုန်ခါခါလေးက ကျွန်မကို မတိုင်ရဲတိုင်ရဲနဲ့။ သူ့ကြီးကြီးကတော့ သူ့အကြံ အတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးတပြုံးပြုံး။ တကယ်တော့ သမီးလေးမြိုချလိုက်တာ ထမင်းတွေမဟုတ်ဘူး အကြောက်တရားတွေ။ သမီး ရင်ဘတ်သေးသေးလေးထဲ ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ ထမင်းတစ်နပ်စီ။
“ ရေမချိုးချင်ဘူး ရေမချိုးဘူးလို့ အီးဟီး”
“ လာပါ မီးမီးရဲ့ မေမေချိုးပေးမယ်လေ နော် လိမ္မာတယ်”
“ ချိုးဘူး ချိုးဘူး”
“ ဟဲ့သမီး ကလေးကို အဲဒီလိုချော့နေလို့မရဘူးလေ ဖယ်ပါဦးအေ ကျုပ်ပြမယ်”
“ မီးမီးငယ်ရေ ရေမြန်မြန်ချိုးနော် မချိုးရင် ဒီပိုက်ထဲကနေ သရဲကြီးကဆင်းလာပြီး မီးမီးလက်တွေကို စားပစ်လိုက်တော့မှာ သိတယ်မလား ဟော အသံကြားတယ် လာနေပြီထင်တယ်”
သမီးကိုယ်လေး ဆတ်ခနဲတုန်ရင်း ခေါင်းလေးကို ခပ်မြန်မြန်ညိတ်၊ ရေလောင်းပေးတော့ မငြင်းမဆန်နဲ့ ရေပိုက်ကို လုံးဝမော့မကြည့်။ သမီးရေချိုးတာ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးအတွက် မဟုတ်၊ သူ့လက်ကလေးတွေ အကိုက်ခံရမှာစိုးလို့ အလန့်တကြား ချိုးနေရတာ။ သမီးပေါ်စီးဆင်းသွားတာ ရေတွေမဟုတ်ဘဲ သမီးလေးရဲ့အကြောက်တရားတွေ။
“ ဟော မေမေရေ မုန့်သည်လာနေပြီ မီးစားမယ်၊ မီးစားမယ်နော်”
“ ဟိတ် တိတ်စမ်း …. အဲဒါ ဒေဝေါကြီးနော် မီးငယ်ကိုဖမ်းစားဖို့ လူယောင်ဆောင်ထားတာ ခေါ်တာနဲ့ လာဖမ်းစားမှာတဲ့ စားချင်သေးလား ခေါ်လိုက်မယ်လေ ဈေးသည် … ရေ”
“ ဟင့်အင်း မီးမစားတော့ပါဘူး ကြောက်တယ်”
“ အင်း မစားနဲ့ ဒီညကလေးတွေကို ပိုစားမှာလို့ကြားတယ် မီးငယ်က ဘယ်မှမသွားဘဲ ခုံမှာပဲထိုင်နေတော့နော် ငြိမ်ငြိမ်မနေလို့လာဖမ်းသွားရင် ဖွားလေးတို့လည်း မထည့်ပေးဘဲ မနေရဲဘူး”
သူ့အရုပ်ကလေးကိုပိုက်၊ ထိုင်ခုံထောင့်လေးမှာ ငြိမ်ကျသွားတဲ့သမီးဟာ ခေါင်းကိုငုံ့လို့ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ချုံ့နိုင်သမျှချုံ့နေရှာတယ်။ သူတို့ရုပ်ရှင်ကို အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းကြည့်ရဖို့ အတွက် သမီးလေးက သူ့အကြောက်တရားဟာ ပြတင်းပေါက်က ဝင်လာမလား မဝံ့မရဲ တုန်နေရရှာတယ်။ တရားရဲ့လား။
ကျွန်မ ကို ပိုတယ်ထင်မှာပဲ။ နင်တို့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲကြီးလာ တာလို့ပြောမှာပဲ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မ ဒီလိုကြီးလာရလို့လည်း ကျွန်မကြီးပြင်းလာရတဲ့အခါ လူတောမတိုးတာ၊ သံသယကြီးတာ၊ ကြောက်တတ် သိမ်ငယ်တတ်တာ၊ မလိုအပ်ဘဲ ရှက်ရွှံ့နေတတ်တာ အဲဒါတွေအကုန်လုံး သမီးလေးကို မခံစားစေချင်တာလေ။ ကျွန်မကို ပျိုးထောင်မှုအတွက် ကျွန်မအပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မသမီးလေး အထိပါ ထပ်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။
ထမင်းမစားရင် ထမင်းရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေပြောမယ်၊ ပုံပြင်လေးတွေပြောပြီး ကျွေးမယ်၊ ဇာတ်လမ်းထွင်ပြီး သူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်၊ ထမင်းကို သူစားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြီး သူ့အရုပ်ကလေးတွေနဲ့ ကျွေးမယ်ဆိုရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား။
သူရေမချိုးဘူးဆိုရင် ရေချိုးပျင်းရင်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းပြောပြပေါ့။ ညစ်ပတ်ရင် ဘယ်လိုရောဂါတွေဖြစ်တတ်မလဲ၊ ဘယ်လိုနေမကောင်းဖြစ်တတ်မလဲ သူ့ကိုသေချာပြောပြမယ် ဆိုရင် သူရေမချိုးဘဲ နေပါ့မလား။ အပြင်စာတွေ မစားဖို့အတွက် အပြင်စာတွေက မသန့်ရှင်းဘူးဆိုတာ ရှင်းပြပေါ့။ သူစားချင်မယ့် သရေစာမျိုး လုပ်ပေးမှာပေါ့။ သူနဲ့အတူတူလုပ်မယ့် မုန့်တွေဆိုရင် သူစားချင်မှာပဲ မဟုတ်လား။ သူကိုယ်တိုင် ကူလုပ်ရတဲ့မုန့်ဆိုရင် သူသေချာပေါက်ကို စားမှာပါ။
ကျွန်မတို့ဟာ အကြောက်တရားများ နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခြိမ်းချောက်မှုတွေထဲ ဘာကောင်ကြီးတွေ မှန်းလည်းမသိဘဲ ဘယ်လိုကြောက်စရာမှန်းလည်း မသိဘဲ ခြောက်ခြားရင်း အလန့်တကြားကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက်တော့ အပိုများဖြစ်နေမလားမသေချာပေမယ့် ကျွန်မသမီးလေးကိုတော့ ရဲရဲရင့်ရင့် ကြီးပြင်းလာစေချင်တယ်။ သမီးဟာ မလိုအပ်ဘဲ မထိတ်လန့်တတ်တဲ့၊ အကြောင်းအကျိုး ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ကလေးမလေးအဖြစ် လှလှပပ ရှင်သန်လာစေချင်ပါတယ်။ ဒါ ကျွန်မဆန္ဒလေးပါပဲ .. ။ ။
ပိတျရကျ ဆိုတော့ သမီးလေးကို ထမငျးခှံ့ဖို့တာဝနျကို ကြှနျမ ယူလိုကျတယျ။ သမီးကကောငျးကောငျးမစား၊ ဆော့ လို့ခညျြးသာ နတေော့တာ။ ဘယျလိုခြော့ကြှေးကြှေးကိုမရ။
“ မီးငယျက အရငျနတှေ့ေ ထမငျးစားတယျဆို အခုကြ မစားပါလား ဘယျလိုဖွဈပါလိမျ့”
“ သမီးက ခြော့ကြှေးနတောကိုး ပေး ကွီးကွီးကြှေးပွမယျ”
ပနျးကနျကိုယူပွီး သမီးရှကေို့ သှားထိုငျတော့ သမီးကကြှနျမကို လှမျးကွညျ့တယျ။ သူ့အကွညျ့က တဈမြိုးပဲ ငိုမဲ့မဲ့ကလေးရယျ။
“ မီးငယျ တဈလုပျစားလိုကျ မစားရငျ ဘာဖွဈမလဲ သိတယျနျော”
ထူးထူးဆနျးဆနျးပဲ သမီးက ခကျြခငျြးပါးစပျကို ဟပေးတယျ။ မကျြနှာလေးကတော့ စားခငျြနတေဲ့ပုံမပျေါ။
“ တှတေ့ယျမလားသမီးရဲ့ ကွီးကွီးတို့က အထာရှိတယျ အဲဒီလိုကြှေးရတာ”
“ ဟငျ ဘယျလို အထာတုနျး ကွီးကွီးရဲ့”
“ မီးမီးငယျ ပွောပွလိုကျ မီးမီးထမငျးမစားရငျ ဘာဖွဈမှာလဲ”
“ မီးမီး မစားရငျ …. လမျးထိပျက ကုလားကွီးကိုချေါပွီး ပေးပဈလိုကျမှာတဲ့ မမေေ”
သမီးအသံ တုနျခါခါလေးက ကြှနျမကို မတိုငျရဲတိုငျရဲနဲ့။ သူ့ကွီးကွီးကတော့ သူ့အကွံ အတှကျ ဂုဏျယူမဆုံးတပွုံးပွုံး။ တကယျတော့ သမီးလေးမွိုခလြိုကျတာ ထမငျးတှမေဟုတျဘူး အကွောကျတရားတှေ။ သမီး ရငျဘတျသေးသေးလေးထဲ ကွောကျစိတျတှနေဲ့ ထမငျးတဈနပျစီ။
“ ရမေခြိုးခငျြဘူး ရမေခြိုးဘူးလို့ အီးဟီး”
“ လာပါ မီးမီးရဲ့ မမေခြေိုးပေးမယျလေ နျော လိမ်မာတယျ”
“ ခြိုးဘူး ခြိုးဘူး”
“ ဟဲ့သမီး ကလေးကို အဲဒီလိုခြော့နလေို့မရဘူးလေ ဖယျပါဦးအေ ကြုပျပွမယျ”
“ မီးမီးငယျရေ ရမွေနျမွနျခြိုးနျော မခြိုးရငျ ဒီပိုကျထဲကနေ သရဲကွီးကဆငျးလာပွီး မီးမီးလကျတှကေို စားပဈလိုကျတော့မှာ သိတယျမလား ဟော အသံကွားတယျ လာနပွေီထငျတယျ”
သမီးကိုယျလေး ဆတျခနဲတုနျရငျး ခေါငျးလေးကို ခပျမွနျမွနျညိတျ၊ ရလေောငျးပေးတော့ မငွငျးမဆနျနဲ့ ရပေိုကျကို လုံးဝမော့မကွညျ့။ သမီးရခြေိုးတာ တဈကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးရေးအတှကျ မဟုတျ၊ သူ့လကျကလေးတှေ အကိုကျခံရမှာစိုးလို့ အလနျ့တကွား ခြိုးနရေတာ။ သမီးပျေါစီးဆငျးသှားတာ ရတှေမေဟုတျဘဲ သမီးလေးရဲ့အကွောကျတရားတှေ။
“ ဟော မမေရေေ မုနျ့သညျလာနပွေီ မီးစားမယျ၊ မီးစားမယျနျော”
“ ဟိတျ တိတျစမျး …. အဲဒါ ဒဝေေါကွီးနျော မီးငယျကိုဖမျးစားဖို့ လူယောငျဆောငျထားတာ ချေါတာနဲ့ လာဖမျးစားမှာတဲ့ စားခငျြသေးလား ချေါလိုကျမယျလေ ဈေးသညျ … ရေ”
“ ဟငျ့အငျး မီးမစားတော့ပါဘူး ကွောကျတယျ”
“ အငျး မစားနဲ့ ဒီညကလေးတှကေို ပိုစားမှာလို့ကွားတယျ မီးငယျက ဘယျမှမသှားဘဲ ခုံမှာပဲထိုငျနတေော့နျော ငွိမျငွိမျမနလေို့လာဖမျးသှားရငျ ဖှားလေးတို့လညျး မထညျ့ပေးဘဲ မနရေဲဘူး”
သူ့အရုပျကလေးကိုပိုကျ၊ ထိုငျခုံထောငျ့လေးမှာ ငွိမျကသြှားတဲ့သမီးဟာ ခေါငျးကိုငုံ့လို့ သူ့ကိုယျလုံးလေးကို ခြုံ့နိုငျသမြှခြုံ့နရှောတယျ။ သူတို့ရုပျရှငျကို အနှောငျ့အယှကျ ကငျးကငျးကွညျ့ရဖို့ အတှကျ သမီးလေးက သူ့အကွောကျတရားဟာ ပွတငျးပေါကျက ဝငျလာမလား မဝံ့မရဲ တုနျနရေရှာတယျ။ တရားရဲ့လား။
ကြှနျမ ကို ပိုတယျထငျမှာပဲ။ နငျတို့တုနျးကလညျး ဒီလိုပဲကွီးလာ တာလို့ပွောမှာပဲ။ ဟုတျတယျ ကြှနျမ ဒီလိုကွီးလာရလို့လညျး ကြှနျမကွီးပွငျးလာရတဲ့အခါ လူတောမတိုးတာ၊ သံသယကွီးတာ၊ ကွောကျတတျ သိမျငယျတတျတာ၊ မလိုအပျဘဲ ရှကျရှံ့နတေတျတာ အဲဒါတှအေကုနျလုံး သမီးလေးကို မခံစားစခေငျြတာလေ။ ကြှနျမကို ပြိုးထောငျမှုအတှကျ ကြှနျမအပွဈမတငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမသမီးလေး အထိပါ ထပျဖွဈဖို့မလိုအပျဘူးလို့ထငျတာပဲ။
ထမငျးမစားရငျ ထမငျးရဲ့ကောငျးကွောငျးတှပွေောမယျ၊ ပုံပွငျလေးတှပွေောပွီး ကြှေးမယျ၊ ဇာတျလမျးထှငျပွီး သူစိတျဝငျစားအောငျလုပျ၊ ထမငျးကို သူစားခငျြစဖှယျဖွဈအောငျစီစဉျပွီး သူ့အရုပျကလေးတှနေဲ့ ကြှေးမယျဆိုရငျကော မရနိုငျဘူးလား။
သူရမေခြိုးဘူးဆိုရငျ ရခြေိုးပငျြးရငျဖွဈလာမယျ့ အကြိုးဆကျတှအေကွောငျးပွောပွပေါ့။ ညဈပတျရငျ ဘယျလိုရောဂါတှဖွေဈတတျမလဲ၊ ဘယျလိုနမေကောငျးဖွဈတတျမလဲ သူ့ကိုသခြောပွောပွမယျ ဆိုရငျ သူရမေခြိုးဘဲ နပေါ့မလား။ အပွငျစာတှေ မစားဖို့အတှကျ အပွငျစာတှကေ မသနျ့ရှငျးဘူးဆိုတာ ရှငျးပွပေါ့။ သူစားခငျြမယျ့ သရစောမြိုး လုပျပေးမှာပေါ့။ သူနဲ့အတူတူလုပျမယျ့ မုနျ့တှဆေိုရငျ သူစားခငျြမှာပဲ မဟုတျလား။ သူကိုယျတိုငျ ကူလုပျရတဲ့မုနျ့ဆိုရငျ သူသခြောပေါကျကို စားမှာပါ။
ကြှနျမတို့ဟာ အကွောကျတရားမြား နဲ့ ကွီးပွငျးခဲ့ရပါတယျ။ ဘာမှနျးမသိတဲ့ ခွိမျးခြောကျမှုတှထေဲ ဘာကောငျကွီးတှေ မှနျးလညျးမသိဘဲ ဘယျလိုကွောကျစရာမှနျးလညျး မသိဘဲ ခွောကျခွားရငျး အလနျ့တကွားကွီးပွငျးခဲ့ရပါတယျ။ လူကွီးတှအေတှကျတော့ အပိုမြားဖွဈနမေလားမသခြောပမေယျ့ ကြှနျမသမီးလေးကိုတော့ ရဲရဲရငျ့ရငျ့ ကွီးပွငျးလာစခေငျြတယျ။ သမီးဟာ မလိုအပျဘဲ မထိတျလနျ့တတျတဲ့၊ အကွောငျးအကြိုး ဆငျခွငျတတျတဲ့ ကလေးမလေးအဖွဈ လှလှပပ ရှငျသနျလာစခေငျြပါတယျ။ ဒါ ကြှနျမဆန်ဒလေးပါပဲ .. ။ ။
ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ရာ ၀ူဟန်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ “ရင်ဘတ်နဲ့ရေးတဲ့စာ”
သူစိမ်းကောင်းရင် ဆွေမျိုးထက်သာတယ် ဆိုတာလဲ အမှန်ပါ ဆွေမျိုးယုတ် တဲ့အခါ သူစိမ်းထက် သာတယ် ဆိုတာလဲ လက်တွေ့ပါ
ပဋ္ဌာန်း ကို နားမလည်ပဲရွတ်ရင် အစွမ်းထက်မထက် နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်/မသင့် (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေ )
ညဘက် အိပ်ရေးပျက်ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်း မောပန်းနေသူတွေ ချက်ခြင်းလန်းဆန်းစေတဲ့ ဆေးတခွက်